xurnimada somaliya – SomaliQld
Rigester Somaliqld League
Results 2021|Ramadan cup
Tables 2021|ramadan cup
Results 2021|football tournament
Fixtures 2021|Football Tournament
Tables 2021|Football Tournament
Fixtures Tables Results About
Somali Independence Day Festival.docx
Bandhigii 62aad ee Maalinta Xorriyadda Soomaaliya.
Ururka Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Queensland (SCAQ) wuxuu soo bandhigayaa
Bandhigii 61aad ee Maalinta Xorriyadda Soomaaliya.
Ujeeddada munaasabaddan ayaa ah in loo dabbaaldego maalinta xorriyadda Soomaaliyeed lana soo bandhigo dhaqankeenna iyo taariikhdeenna.
Munaasabada waxaa ka soo qeyb galaya dhamaan bulshada qeybaheeda kala duwan sida odayaasha, dhalinyarada,urarka haweenka, caruurta,aqoonyahanno, hoggaamiyeyaal bulshooyin kale ka soo jeeda. barnaamijyo badan ayaa loo abaabulay oo u qof kasta ka qayb qaadan karo.
Tartan Kubadda Cagta
Qalabka Carruurtu ku cayaarto oo BILAASH AH
Cunto dhaqameedka Soomaalida iyo qaar kaloo badan.
Waxa qofwalibo laga codsanaya in u ka soo qayb galo xalfadani an ku maamuseena xurnimada dalkeena somaliya
Dhamaan dadka kaqeybgalaya, waa inaad kala soo baxataa barnaamijka Check Check in QLD.
Si aan ugu hortagto faafinta cabuqa korono virus waxa qofwalibo laga codsanaya in raaco dhamman astaamaha ka hortaga caabuqa.
Fadlan soo dejiso barnaamijka ‘Check in Qld’ Google Play Store ama Apple App Store.
Barnaamijku waa mid bilaash ah
Taariikh: Sabti 02 luuliyo 2022
Waqtiga: 10:00 am-5: 00pm
Goobta: Xarunta Isbaanishka, Dhismaha Isboortiga Acacia Ridge
Cinwaanka: 174 Mortimer Rd, Acacia Ridge QLD 4110
Ma u baahan tahay macluumaad dheeri ah? fadlan soo wac.
Maareeyaha Tartanka Ciyaaraha
Branmikani waxaa taabo galiyey
Golaha magaalada Brisbane
Haddii aad rabto xalfada inaad cunto ku iibiso iiyo i.w.m waxa qaybta hoose ku qoran sharuudaha laga rabo qofwalibo.
Waad ku mahadsan tihiin dhammaantiin inaad nagala soo qaybgashaan Dabaaldegga Maalinta Xorriyadda Soomaaliyeed ee 2021.
Halkan waxaa ku qoran macluumaad Muhiim ah.
Shuruudaha Cunnada –
dhammaan meheradaha cuntada waa IN ay u hoggaansamaan shuruudaha shatiyeynta
Ku-Meel Gaarka ah ee Golaha Magaalada Brisbane isla markaana ay racaan tilmaamaha Qabashada Cuntada ee Amniga ah.
Cunto lagu karindoona goobta –
Waqti walbo waxa qasab ah in la isticmaalo qaboojiye si loogu kaydiyo cuntada Gaar ahaan hilibka ceyrinka ah
Cunto lagu kariyey goobta –
isla markiiba waa in la bixiyaa ama kuleeliso lagu hayo .
Caymiska Mas’uuliyadda Dadweynaha –
dhammaan milkiilayaashu shahaadooyinka caymiska (Public Liability Insurance)waa in la soo diyaariyo ka hor xalfada.
Waqtiga la imanayo Goobta Xalfada –
heystayaasha dukaanada waxay ay baabuurta la soo gali karaan goobta laga bilaabo 7da subaxnimo ilaa 9:30 subaxnimo. Gawaarida oo idil waa in ay ka baxaan goobta xalafada 10:30 am subaxnimo. Gawaarida waxa ay kusoo noqon doonan goobta 4:30 galabnimo, kuwa haysta dukaamada waxaa si xoog leh loogu dhiirrigelinayaa inay firfircooni mujiyaan illaa 4:30 pm
Shuruudaha Badbaadada Marquee (teendho)
dhammaan iibiyeyaashu WAA IN ay keenan miisaanno ay ku qabsadaan astaamahooda. Marquees-yada (teendho) aan miisaan lahayn waxay noqon karaan kuwo aad khatar u ah.
Dhammaan waxyaalaha korantada WAA IN la tijaabiyo lana calaamadeeyo.
Tixgelinnada Deegaanka –
dhammaan iibiyeyaashu waxa laga codsanaya inay yareeyaan isticmaalka caagagga oo ay doortaan waxyaalo kale oo badan oo deegaanka u habboon. Qaab dhismeedka goobta iyo Goobaha uu qofwalibo dhigayo Alaabtiisa-
macluumaadkan waxaa lagugu siin doonaa khariidad (map) goobta ka hor xalfada .
Bixinta khidmadaha istaandarka –
fadlan bixi khidmadahaaga kahor xalafada. Waxaan kuu soo diri doonaa qaansheegta (invoice) waqti yar ka dib , oo leh macluumaad ku saabsan habka lacag bixinta.
ayaa kaa taageeri doona inaad heshid booskaaga markii aad timaaddo. Ruqsadaha cuntada waa in la bixiyaa kahor Xalfada – Waxa qofwalibo laga codsanaya in ay racaan tilmaaha aan kor kusoo xusnay .
independence day Cup 2021